Nilaza izy ireo fa mandalo fahasahiranana lalina ankehitriny ny mpitantana tobin-tsolika rehetra, indrindra eo amin’ny lafiny ara-bola sy ny tsy fandriampahalemana ary anisan’izany ny fandrobana sy ny famoizana ain’olona. Nitaraina ireo mpandraharaha ara-tsolika ireto ary nilaza fa zara raha misy 2% ny tombombarotra azon’izy ireo. Ny kaompania kosa anefa dia mandray vola be satria 50 hatramin’ny 52Ariary izaky ny litatra no alain’izy ireo. Izany no anton’ny fivoriana natao omaly mba hanamafisana sy hanavaozana indray ny fomba fiasan’ny GPGLSS (Groupement Professionnel des Gérants Libres de Station-Service). Napetraka tamin’ity fotoana ity ihany koa ireo tompon’andraikitra matihanina ho mpanatanteraka sy hiasa amin’ny fiarovana ny tombontsoa iombonan’ny mpitantana tobin-tsolika. Nentanina nandritra ny fivoriana ihany koa ny fanamafisana sy ny fanaovana antso avo ho an’ireo rehetra voakasika mivantana na an-kolaka amin’ny raharaha fandraharahana ara-tsolika mba hijery haingana ny famaritana ny vidin-tsolika ho tombontsoan’ny rehetra. Mahakasika ny tenin’ny filoham-pirenena ny amin’ny tsy maintsy hampidinana ny vidin-tsolika dia nanambara izy ireo fa miandry fatratra izany tahaka ny olom-pirenena rehetra.